Fananganana, Toerana madio sy fahalalahana ary olon-tsotra - Faucets ao an-dakozia tsara indrindra 2020 | Faucets an-dakozia tsara indrindra | Faucet ao an-dakozia
Home / Interior design / Fananganana, Toerana malalaka an'ny fahalalahana sy ny herisetra
Fananganana, Toerana malalaka an'ny fahalalahana sy ny herisetra
2021 / 08 / 13 FisokajianaInterior design 2250 0
Alliance Eos Interior Design
Fananganana fananganana minimalista
Ity dia trano miendrika L 115㎡ any amin'ny Faritanin'i Taiwan, misy zaza roa monina ao. Tsy te-hameno ny efi-trano ny tompony ankehitriny satria mbola tanora ny ankizy, ary te hitazona ny fiovan'ny toetrany amin'ny ho avy. Ny trano tany am-boalohany dia manana hazo tranainy ao, ary ny jiro tsy dia mamirapiratra loatra. Ny tompony dia nanakarama ny mpamorona Ming-Hui Cheng an'ny Bug Idea hanamboatra ny tranony.
Plan drafitra fanoratana tany
Ny drafitra tany am-boalohany dia mampiseho fa tsy tsara ny firafitra. Lava sy tery loatra ny lalantsara, ka lasa lava sy maizina loatra ny habakabaka. Voalohany, nesorin'ny mpamorona ny partitions anatiny ary nanamboatra ny tsipika mihetsika telo.
Ny famolavolana ny efitrano dia mifototra amin'ny foto-kevitry ny "fisarahana miendrika L" sy ny "tsipika roa".
Ny lamina miendrika L dia mizara ho sakana roa: ny efitrano fandraisam-bahiny misokatra sy ny efitra fisakafoana + ny lakozia any ambany / ny efitrano etsy ambony no efitrano mila fiainana manokana
Avy amin'ny drafitry ny gorodona manontolo, nanandrana nanalemy ny lesoka tamin'ny lalana lavitra be loatra ilay mpamorona. Nampifandraisiny ny sakana ambony sy ambany amin'ny sakana manga. Ity vavahady manga ity dia tsy ny fidirana ao amin'ny efitrano ihany, fa koa mampiditra ny efitrano fitahirizana sy ny toerana fitahirizana. Raha tokony hanafina ny varavarana sy ny rindrina ianao, amin'ity indray mitoraka ity, ny "varavarana" dia asongadin-tseranana miaraka amin'ny loko misy azy, mamadika azy io ho toerana tetezamita mahaliana.
Ny efitrano fatoriana ambony dia misaraka amin'ny efitranon'ny ankizy amin'ny varavarana misosa. Ny varavarana mihetsiketsika dia sokafana mandritra ny fotoana ara-dalàna, ka manjary manamboatra efitrano lehibe izy io. Mety ho azy ireo ny milalao na miara-matory.
▲ Ny haben'ny manga eo afovoany dia mampifandray ny habaka ambony sy ambany.
Ny fijery avy eo am-baravarana fidirana mankany anatiny, ny habaka iray manontolo koa dia manana feo madio sy tsotra. Ny habaka manga eo afovoany dia sehatra tetezamita mampifandray ny tontolon'ny besinimaro sy ny sehatra tsy miankina. Ny lakozia sy ny efitra fisakafoana dia eo ankavia, ary ny efitrano fandraisam-bahiny dia eo amin'ny ankavanana. Ny takona sy ny fitehirizana dia miafina daholo. Ao ambadiky ny seza misy efitrano fitahirizana iray manontolo. Ny kabinetra fahitalavitra dia miafina ao anaty rindrina ihany koa. Ny lalambe am-baravarankely dia mifandray amin'ny efitranon'ny ankizy.
Ny gorodona dia vita amin'ny simenitra bitika. Eo amin'ny lafin'ny faritra fisakafoanana dia boaty mainty no ampiasaina hampidirana ny valizy piano, ny cooler divay ary ny fitoeram-bokatra. Amin'ity fomba ity dia tsy ho korontana ny fitehirizana.
Ny nosy afovoany dia mifangaro amin'ny latabatra fisakafoanana, mifototra amin'ny fampiasana ireo singa mifangaro amin'ny habetsahana sy ny birao. Miitatra hatrany amin'ny latabatra ny gorodona ary ampiarahina amin'ireo boaty mba hamoronana latabatra nosy afovoany namboarina, mamorona fomba hafa hampiasana azy. Ny faritra lapoaly mafana ao an-dakozia dia apetraka eo an-joron-trano, ka tsy ilaina ny manampy varavarana misosa hidina manokana, ary afaka hihazona ny ampahany misokatra.
Ny loko telo amin'ny volondavenona sy mainty ary hazo dia ampifandimbiasana. Ny mainty no toerana fitahirizana fitaovana. Ny volondavenona dia eo an-tampon'ny latabatra, izay azo noforonina koa ho fanitarana.
Ny lalantsara manga eo anelanelan'ny efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fandraisam-bahiny. Ny lafiny iray dia efitrano fitahirizana entana, ary ny ilany iray kosa dia kabinetra basy ho an'ny lalao ivelan'ny lehilahy. Manantena aho fa hanana fiovan'ny toe-tsaina ny tompony rehefa mandalo ity habaka tetezamita ity.
Façade tsy ara-dalàna tany am-baravarankely. Nampifangaroin'ilay mpamorona endrika hazo iray ary namadika azy io ho fidirana sy fivoahan'ny efitranon'ny ankizy. Miteraka fidirana an-dàlana sy hamahana ny olan'ny lalan-tongotra lava io. Ny sakana manomboka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ka hatrany amin'ny efitranon'ny ankizy dia natao ho faritra fianarana ho an'ny ankizy amin'ny ho avy.
Na dia efitrano lehibe iray aza ny efitran-jaza ankehitriny, dia natokana ihany koa ho sarahina ho efitrano roa ho an'ny ankizy amin'ny ho avy. Izany dia manome fahafaham-po tanteraka ny fanirian'ilay tompon-trano ny fahaiza-manaony amin'ny fiainana.
Ho an'ny fandrafetana ny efitranon'ny ankizy ankehitriny, ny mpandrafitra dia nampiasa fandriana fandriana (io fandriana io dia azo esorina anaty fandriana roa tokana amin'ny manaraka), noho izany ny drafitra dia namolavola ny fanaingoana ny planina gorodona dimy taona taty aoriana.
Ny efitrano fatoriana dia mifamatotra amin'ny efitranon'ireo ankizy amin'ny alàlan'ny varavarana misosa. Satria mandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny zanany ny tompon-trano, miara-matory na miara-milalao dia zava-dehibe ny mampifandray toy izany ny efitranon'ny ankizy, ary mpanjifa maro amin'izao fotoana izao no tena mila izany.
Ny efitrano fatoriana lehibe dia misy varavarana mihetsiketsika roa, ny lafiny iray dia ny efitrano fisoloana akanjo sy ny fandroana master, ary ny lafiny iray kosa mifandray amin'ny efitranon'ny ankizy.
▲ Ny fijerin'ny efitrano fatoriana mankany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
Ny fahitana ny efitrano fandraisam-bahinin'ny tompony mijery ny efitrano fandraisam-bahiny, ilay boaty manga lalina dia mitondra ny eritreritra amin'ny toerana hafa.
Ny lohan'ny efitrano fatoriana dia mipaka hatrany amin'ny efitrano fisoloana akanjo, ary ny kabinetra amin'ny fitafiana mihazakazaka mamakivaky ny tampon'ny fandroana ao anaty fandroana, manantena ny hiteraka fanitarana maso sy anatiny.
Ny faran'ny trano fidiovana dia ao amin'ny faran'ny efitra fisoloana akanjo. Ny sakan'ny habaka andalana iray dia tsy mety. Saingy aorian'ny filaharana ireo faritra miasa dia mety tsara na amin'ny fampiasana na amin'ny fahitana.
Ny faritry ny fandroana ao amin'ny trano fandroana ho an'ny besinimaro dia sarin'ny loko mineraly. Ny loko mavo mafana dia mampiseho ny hafanana sy fahaiza-mandray ny tompony.
Previous :: "Fotoana fanapahan-kevitra", trano fialantsasatry ny mpisava lalana eo ambanin'ny sary fanadihadiana | JK Lien Design Next: 155㎡Ny habaka boribory, Taranaka telo miara-miaina tsy misy banga amin'ny taranaka. Rikyu Design
2021 / 08 / 15 2082
2021 / 08 / 15 2978
2021 / 08 / 15 2357